Yareenta Adeegisga Daawooyinka Antibaayootikaga | Hawraar
May 25, 2016 Xiisaha/Xulashada
Yareenta Adeegisga Daawooyinka Antibaayootikaga
Waxay ku sheegeen inaysan caadi aheyn natiijada, ayna muujineyso sida dhakhaatiirta uga taxadareen inay iska qoraan. Tani ayaa qeyb ka ah dadaal balaadhan oo lagu joojinayo caabuqyada waxyeelada leh ee adkeysiga u yeelanaya antibiyootikada.
Antibiyootikada, ayaa wax ka qabata caabuqa bakteeriyada oo kaliya, mana jirto sabab loogu qaato xanuunada Viruska keeno sida hargabka.
Waxaa jiray walaac kordhayay oo ku saabsan adeegsiga antibiyootikada sida lagu sheegay warbixintii toddobaadkii tagay ee Lord Jim O’Neill.
“Waqti ay wasaaradda caafimaadka UK ku hormartay meelo badan oo bukaanka lagu caawiyo, seyniska iyo farsamada ayey tahay in ay ka hortagaan in caafimaadku ku laabto meel aysan antibiyootikada waxba ka qaban karin caabuqyada,” ayuu yiri Dr. Mike oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka UK.